Ny filoham-pirenen'i Reunion dia nahomby tamin'ny fiantsoana ny fandoavan-ketra amin'ny hetra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny filoham-pirenen'i Reunion dia nahomby tamin'ny fiantsoana ny fandoavan-ketra amin'ny hetra
Tamin'ny fanambarana navoakany nandritra ny harivan'ny talata 20 novambra lasa teo, ny filohan'ny faritra Réeunion, Didier Robert, dia nilaza fa nangataka famindram-bola tamin'ny governemanta frantsay tany Paris ny amin'ny fampiakarana ny hetra amin'ny solika. Ny mekanika vaovao amin'ny fampitomboana dia tsy maintsy hanan-kery ao amin'ny Assembly of Plenary nampiana.
Didier Robert, ny filohan'ny Fivorian'ny Faritra, dia nanambara izany ny talata hariva teo amin'ny alàlan'ny fanambarana an-gazety. Taorian'ny nitaterany ny fanohanany ilay akanjo mavo, izay inoany fa “ady ara-dalàna”, dia nanazava izy fa nangataka famotsoran-keloka ho an'i Reunion momba ny fiakaran'ny hetra solika mandritra ny 3 taona ho avy ny governemanta.
Ny fangatahana nataony tamin'ny minisitry ny avy any ivelany, Annick Girardin, izay nihaonany tamin'ny tolakandro teo. Nanampy izy hoe: "Hanao amin'ny Antenimiera plenary manaraka izahay hanamarinana ity fomba vaovao ity izay hanakana ny fiakaran'ny hetra solika ho an'ny mpamily Reunion rehetra amin'ny 2019, 2020 ary 2021."
Didier Robert dia mino fa ny fampiakarana io haba io, apetraky ny lalàna eo amin'ny sehatra nasionaly, dia iray amin'ireo taranja fihenjanana amin'ity krizy ity. Nanampy izy hoe: "Tsy maintsy miroso miaraka amin'ny fanahin'ny firaisankina sy andraikitra isika mba hampatanjaka ny governemanta hamaly ny famoizam-po ataon'ny fianakaviana maro."
MIJORO NY FANDAMINANA - Nahomby tamin'ny fanala ny hetra i Didier Robert
Didier Robert, ny filohan'ny filankevi-paritry ny Réunion dia nifampiraharaha ary nahazo ny alarobia lasa teo ny fihenan'ny hetra manokana amin'ny fanjifana solika mandritra ny telo taona. Ity hetra ity, manan-kery any amin'ireo departemanta any ampitan-dranomasina, dia tokony hitombo be amin'ny taona 2019, 2020, 2021.
Tena henjana ny raharaha tao amin'ny nosy Réunion hatramin'ny nanombohana ny hetsika akanjo mavomavo ny sabotsy lasa teo. Ilay nosy dia niatrika herisetra nipoaka, nanapa-kevitra ny hanidy sekoly, ny seranam-piaramanidina iraisampirenena, ny crèches ary ny fitantanan-draharaha. Tamin'ny niandohan'ity fikorontanana ity dia ny hetsika izay nanakana ny metropole France nandritra ny herinandro
Ao amin'ny Nosy Réunion, ny antson'ny hetsika Vest Yellow Vests dia ampahany, noho ny hetra manokana amin'ny fanjifana solika, ny mitovy amin'ny TICPE, ny hetra amin'ny fanjifana avy any an-toerana ny vokatra angovo, ny nosy ary ny fanantenana ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny manaraka telo taona. Ny alarobia lasa teo dia nanontany ny governemanta frantsay sy ny minisitry ny avy any ivelany i Didier Robert, momba ny fampiakarana ny hetra amin'ny solika. Hihamangatsiaka izao haba izao mandritra ny telo taona manaraka.
Ity hetra ity, nolanin'ny Faritra tamin'ny volana desambra lasa teo, araka ny fangatahan'ny Fanjakana, dia isan'ny manokana isam-paritra. Ny fanjakana dia maniry izany hetra manokana izany amin'ny DOM ihany, mba hifanaraka amin'ny TICPE, manan-kery ao amin'ny tanibe France. Iray amin'ireo fangatahana lehibe ataon'ny Reunion Vest Yellow ary ny adin'izy ireo dia, eo imason'i Didier Robert, filohan'ny faritra, "ara-dalàna", araka ny nambarany tamina fanambarana iray.
Ity fihenan-ketra ity dia, ho an'i Didier Robert, filohan'ny filankevi-paritra, “fanapahan-kevitra maika”. Ny hatsiaka azy ireo dia mahafaly antsika ny andrasan'ny mpanao fihetsiketsehana ary miandrandra ihany koa ny zavatra hitranga mandritra ny telo taona ho avy, ”hoy izy tao amin'ny gazety iray avy amin'ny nosy.
Izany dia adika amin'ny maimaim-poana amin'ny 22%, ho an'ny diesel, 5%. Amin'ny paompy, io dia adika ho solika diesel amin'ny 1.28 euro isaky ny litatra. Ny tsy misy firamainty dia amin'ny 1.56 euro isaky ny litatra, amin'ny Novambra 2018.
Loharano: La rédaction de LCI
Manome famotsoran-ketra ho an'ny mpampiasa vola fizahan-tany i Nizeria
Very fanantenana ireo mpandraharaha mpizahatany Tanzania